रेमिट्यान्स अर्थतन्त्र र हुन्डी - Karobar National Economic Daily
रेमिट्यान्स अर्थतन्त्र र हुन्डी
query_builderJuly 11, 2017 11:53 AM supervisor_accountजगदीश दाहाल visibility4154
नेपालको वार्षिक बजेटको स्रोतका रूपमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा रेमिट्यान्सले ओगटेको छ । रेमिट्यान्सबाट अर्थतन्त्र चलाउने देशको सूचीमा नेपाल विश्वमै अग्रस्थानमा परेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोषले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सो कुरा उल्लेख छ, जसले रेमिट्यान्समा नेपालको निर्भरता उच्च रहेको देखाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय कोषको प्रतिवेदनअनुसार रोजगारीका लागि विदेश जानेहरूले पठाएको रकमले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब ३२ प्रतिशत ओगटेको जनाएको छ । नेपालमा रेमिट्यान्सको प्रवाह दातृ निकायबाट प्राप्त हुने आधिकारिक आर्थिक सहायता (ओडीए) भन्दा धेरै छ । नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रचलनको इतिहास लामै भए पनि अर्थतन्त्र नै रेमिट्यान्समा निर्भर भएको भने धेरै भएको छैन ।
विशेष गरी सन् १९९६ पछिको एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व र त्यसपछिको अस्थिरताको वातावरणमा अर्थतन्त्रको एक मात्र आधार रेमिट्यान्स बनेको छ । यसरी भित्रिएको रेमिट्यान्सको आम्दानीबाट देशको समष्टिगत अर्थतन्त्र तथा व्यक्तिगत परिवारको आर्थिक विकासमा टेवा पुगेको छ भने देशमा विद्यमान गरिबी र बेरोजगारको चपेटामा परेका युवा दक्ष, अर्ध–दक्ष तथा अदक्ष युवाहरूले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् ।
हाम्रो वार्षिक बजेटको स्रोतको हिसाबमा रेमिट्यान्सको योगदान ३५/४० प्रतिशत रहेको पाइन्छ । तथापि अहिले नेपाली युवायुवतीहरू बिदेसिएको संख्यालाई हेर्ने हो भने उनीहरूबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्सले वार्षिक बजेटमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्नुपर्ने हो । तर, नेपाली कामदारहरूले विदेशमा कमाएको पैसा सबै रेमिट्यान्सका रूपमा आउन सकिरहेको देखिँदैन ।
औपचारिक माध्यम अर्थात् बैंकिङ च्यानलबाट सबै रकम रेमिट्यान्सको रूपमा नआउनुको मूल कारण हुन्डीको कारोबारले गर्दा हो भन्ने कुरामा दुईमत छैन । गैरकानुनी रूपमा रकम ल्याउने÷लैजाने र विदेशी मुद्रामा चलखेल गर्ने हुन्डी व्यवसायीहरू झनै मौलाउँदै गइरहेका छन् ।
विदेशमा नेपाली श्रमिकहरूले कमाएको धेरै रकम हुन्डी कारोबारीहरूका कारण विदेशमै अड्किएर बस्ने गरेको छ । यसमा नेपाल सरकार, राष्ट्र बैंक वा कसको कमजोरी हो भन्ने प्रश्न खासै उठेको पाइँदैन । कुन देशमा कति नेपाली कामदार गएका छन् भन्ने तथ्यांक सरकारले राखेकै हुनुपर्छ । तर, ती देशबाट कामदार संख्याको हिसाबमा सबै रेमिट्यान्स औपचारिक माध्यमबाट आइरहेको छ त ? सरकारले यसको सम्पूर्ण लेखाजोखा राख्न सकेको पाइँदैन ।
अरूको त कुरै छोडौं, सरकार–सरकारबीच सम्झौता भएर दक्षिण कोरियामा कति नेपाली कामदार पुगेका छन् त्यो पूरापर तथ्यांक सरकारसँग छ । अहिले कोरियामा करिब ४१ हजार नेपाली कामदार छन् । तर, कोरियामा रहेका नेपाली कामदारको वार्षिक पारिश्रमिक हिसाब गर्ने हो र त्यहाँबाट आउने रेमिट्यान्स रकमलाई तुलना गरेर हेर्ने हो भने आश्चर्यजनक अवस्था छ ।
कोरियाबाट वार्षिक ४९ देखि ५२ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स आउनुपर्नेमा ५/६ अर्ब मात्रै रेमिट्यान्सका रूपमा नेपाल भित्रिने गरेको पाइन्छ । अरू पैसा कहाँ गयो त ? सरकारले हुन्डीको कारोबारलाई गैरकानुनी घोषणा गरे पनि सरकारी सरकारी कोटामा कामका लागि कोरिया गएका धेरैजसो नेपालीले हुन्डीबाट पैसा पठाउने गरेको पाइएको छ ।
कोरियाबाट पुँजी पलायन गर्न सक्रिय हुन्डीवालाहरूको समूहले त्यहाँ कार्यरत नेपालीहरूलाई केही महँगोमा पैसा दिएर डलर किनेर सिंगापुर लगेर बेच्ने भएकाले पनि कोरियामा कार्यरत नेपाली कामदारहरू हुन्डीमा आकर्षित भएको बताइन्छ । तर, यसबारे राज्यले गहिरिएर खोजीनिती गरेको देखिँदैन । हुन्डीवालाहरूका कारण त्यहाँ नेपाली कामदारहरू मर्कामा पनि परेका छन् ।
हुन्डी व्यवसायीहरूले संकलन गरेको रकम पनि नेपाल नपठाइदिँदा धेरै कामदार ठगिएका छन् । कोरियामा एक जना हुन्डीवालाले नेपाली कामदारसँग संकलन गरेको सबै रकम क्यासिनोमा हारेपछि आत्महत्या नै गरे, जसले गर्दा नेपालीहरूको मेहनतको कमाइ सबै डुबेको पनि सुन्नमा आएकै हो । त्यहाँ हुन्डी व्यवसायीहरूबाट नेपाली कामदार ठगिँदै आएका प्रशस्त दृष्टान्त छन् ।
कोरियामा गएका कामदारहरूको पैसा नेपाल कति भित्रियो वा भित्रिएन, कोरिया सरकार वा त्यहाँका बैंकहरूसँग के–कस्तो समन्वय गरेर पूरै रकम रेमिट्यान्सका रूपमा भिœयाउन सकिन्छ भनेर नेपाल सरकारले खासै ध्यान पु¥याएको देखिँदैन ।
कम्तीमा ‘सरकार–सरकारबीच’ सम्झौता भएर नेपाली कामदार पठाइएको मुलुकबाट त वैधानिक च्यानलबाट रेमिट्यान्स भिœयाउन केही पहल हुनुपर्नेमा त्योसमेत नहुनु विडम्बनापूर्ण कुरा हो । कोरियामा रहेका कामदारले नेपालमा पैसा पठाउँदा सेवा शुल्कबापत अलि बढी रकम तिर्नुपर्ने भएकाले हुन्डीको कारोबार बढेको भन्ने पनि सुनिन्छ ।
यो अवस्थामा बैंकिङ च्यानलबाट रेमिट्यान्स पठाउने कामदारको सेवाशुल्क सरकारले तिर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने कुरा पनि नउठेको होइन । रेमिट्यान्समा लाग्ने शुल्क मिनाहाको नीति सरकारले ल्याउन सके सम्पूर्ण रकम औपचारिक माध्यमबाट आउने बाटो खुल्न सक्छ ।
गत वर्ष संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले विदेशमा रहेका नेपालीले बैंकिङ प्रणालीमार्फत नेपालमा रेमिट्यान्स पठाउँदा लाग्ने कमिसन तथा शुल्क नेपाल सरकारले बेहोर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, त्यो कार्यान्वयन गरिएन ।
सरकारले रेमिट्यान्स भिœयाउँदा लाग्ने रकममा छुट गर्न सके विदेशबाट कामदारले पठाउने रकम वैध बाटोबाट भिœयाउन टेवा पुग्ने मात्र होइन, नेपालीको विदेशी विनिमय सञ्चितिसमेत बढ्ने देखिन्छ । तर दुर्भाग्य, सरकारी बेवास्ताकै कारण हुन्डीमार्फत कारोबार गर्नेले खेल्ने मौका पाएका छन् ।
यसैबीच कोरियामा रहेका नेपाली कामदारहरूको पारिश्रमिक बैंकिङ च्यानलबाट कसरी नेपाल ल्याउन सकिन्छ भनेर अध्ययन–प्रतिवेदन पेस गर्नका लागि भर्खरै मात्र कर्मचारी तहमा तीन सदस्यीय एउटा समिति बनेको सुन्नमा आएको छ ।
त्यो समिति कति सक्षम र प्रभावकारी सिद्ध हुन्छ भनेर पछि उसको कामले देखाउला, तर नेपाली कामदार गएका मुलुकमा उनीहरूको अवस्था, कामदारप्रति त्यो मुलुकको व्यवहार, हाम्रो सरकारले आफ्ना नागरिक गएका मुलुकसँग गर्नुपर्ने समन्वय अनि नेपाली कामदारले कमाएको पैसा दुरुपयोग हुन नदिने व्यवस्थाका लागि वास्तवमै सरकार सजग हुन जरुरी देखिन्छ ।
समस्या सबैतिरको छ, तर कोरियाको हकमा नेपाल सरकार र कोरियन सरकारबीच सम्झौता भएर, संख्यासमेत निश्चित गरेर र परीक्षा लिएर नेपाली कामदार पठाइने भएकाले सम्पूर्ण तथ्यांक सरकारसँग हुँदा पनि त्यहाँ उनीहरूले कमाएको पारिश्रमिक सबै वैधानिक च्यानलबाट नभित्रिँदा सरकारको कमजोरी देखिन गएको हो ।
अर्कातर्फ, रेमिट्यान्सको सन्दर्भमा अहिले नयाँ समस्या आउँछ कि भन्ने डर भएको छ । अहिले कतारमा करिब ५ लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा रहेको अनुमान गरिएको छ । कतारबाट नेपालमा राम्रो अंकमा रेमिट्यान्स आउँछ । तर, अहिले कतारमा देखिएको समस्याले नेपाली र नेपाल आउने रेमिट्यान्समा पनि समस्या उत्पन्न हुने आशंका गरिएको छ ।
कतार समस्याको प्रभाव सम्पूर्ण खाडी राष्ट्रमा पर्दा त्यसको असर अझ ठूलो हुनेछ । यसले रेमिट्यान्स र त्यससँग सम्बन्धित सबै क्रियाकलापमा असर पर्छ कि भन्ने लागिरहेको छ । त्यसो त, नेपाली श्रमिकहरूको माग गर्ने धेरै देश छन् । नेपाली कामदार इमानदार र लगनशील हुने भएकाले विश्वका धेरै देशमा उनीहरूको ठूलो माग छ ।
अहिले जे–जति मुलुकमा नेपाली कामदारहरू गइरहेका छन्, तीबाहेक अन्य मुलुकहरूको श्रमबजारमा पनि अत्यधिक माग छ । त्यसैले नेपाली नागरिक श्रमिकका रूपमा विदेश गएर श्रम गरेर उनीहरूले कमाएको पैसा सहज रूपमा आफ्नो घरपरिवारमा पुग्ने वातावरण मिलाउनु सरकारको पनि कर्तव्य हो ।
बजेट रेमिट्यान्स अर्थतन्त्र संयुक्त राष्ट्रसंघ